I-Novenario yomfi deceased ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Xa umntu eswelekile okanye eyinxalenye esondeleyo kuyo, kuyinto eqhelekileyo ukuyenza novena yomfi, Ukuvumela ukuba unike loo mzuzu wokuzinikela kunye nokuvalelisa kubukumkani bukaThixo.
1 Yithi ndlela-ntle ngeNovenario yomfi
1.1 Yintoni iNovenario yalowo ungasekhoyo?
1.2 Kutheni le novena?
1.3 Uyenza njani i-novena?
Yithi ndlela-ntle ngeNovenario yomfi
Ukufa Ngumzuzu onzima kakhulu ogcwele amandla angwevu kubomi babantu, abanye abazi ukuba bajongane njani nayo, okanye indlela yokuvalelisa kwilungu losapho okanye umntu oshiyekileyo. Ngumzuzu xa umntu othile esiya kudlula ngenqwelomoya, inkolelo yobuKrestu ithathela ingqalelo ukuba ubukumkani beNkosi, iParadesi, ukuze umoya wakhe uphumle ebuqaqawulini bukaThixo.
ICawa yamaKatolika iyangcwaba umntu kwaye imnike amazwi akhe okugqibela, ukuze ifumane uxolelo lwezono zayo kwaye, ngale ndlela, ifezekise ukuhlanjululwa komphefumlo wayo. U-Yesu ucacisile ukuba akukho mfuneko yokoyika ukuphuma komphefumlo emhlabeni, kuba umzimba wenyama ngulowo utshabalalayo, nangona kunjalo, uya kuba nakho ukuvusa ebukumkanini beNkosi, indawo apho bonke abantwana UThixo uya kuphinda ahlangane. Benze kakuhle kunye nentlalontle yabanye.
AmaKrestu akhethe ukuvalelisa kwizizalwane zethu ngokungcwaba, enika okokugqibela imiphefumlo yabo. Ngethuba lokungcwatywa, elowo unika amazwi okuvalelisa kunye neinyembezi, ngaloo ndlela esabelana nomfi ixesha lokugqibela emhlabeni.
Eyona nto ilungileyo, emva kokungcwatywa kunye nokungcwatywa komntu, kukwenza iNovenario, efuna ukunika ukuphumla noxolo umoya ongasekhoyo emhlabeni, kodwa onyukela ezulwini. Imithandazo eyenziweyo ifuna ukuthuthuzela kunye nokukhokela abantu, ukongeza, isebenza njengokucocwa komphefumlo waloo mntu ushiyekileyo.
Yintoni iNovenario yalowo ungasekhoyo?
Las palabra novenario, proviene del latín Novem, que traducido a nuestra lengua en español, la misma significa «novena» o nueve, lo que da entender un período de nueve días, en los cuales se desarrolla algún acontecimiento o hecho de importancia. Los nueves días en el inkolo yamaKrestu, se relacionan con la devoción, una que está conectada a la adoración a lo divino, tanto al mismísimo Dios, como a sus santos o a la virgen María.
I-novena sisenzo sokholo kunye nokuzingisa, kuba kuyo, inkolelo yabantu iyaphuhliswa, ifuna ngokholo lwabo ukwenza ibhunga loxolo nothando, phakathi kwento abayibonayo emthandazweni wabo nento abafuna ukuyinika, ukuba isithembiso, intlawulo okanye ukuzinikela okulula kumntu lowo. Ngoku, kwimeko yomfi, yinto engaphaya kokuzinikela, kukucela inceba okanye uthando ngomphefumlo walowo sele emkile.
Xa umntu esifa, inxenye yakhe ishiya inqwelomoya yabaphilayo, kodwa inxenye yakhe ihlala iphila kunakuqala; umoya wakhe, ofuna ukufezekisa uxolo ekukhanyeni kweNkosi. I-novena yomfi, ifuna ukuzisa umfi kolo xolo, izama ukwenza ezo ntsuku zili-9 uhambo olupheleleyo, apho amalungu osapho okanye abahlobo baxolelanisa uxolo lokomoya lwaloo mntu, bebuza yonke imihla, ngemithandazo kwaye, kwezinye iimeko, iingoma.
Nangona i-novena isisithethe esenzelwa abanye abangcwele, ungayenza loo nto ukunika isipho sakho somoya kubantu obathandayo okanye kubahlobo bakho. Abantu abaqhuba iintsuku ezilithoba, kufuneka babenolwazi ngayo yonke into abayithethayo kwaye bacele umphefumlo womfi.
Kutheni le novena?
I-novenary okanye i-novena, ziintsuku ezili-9 zokuzinikela kunye nokuzila okupheleleyo, okubaluleke kakhulu kuwo onke amandla kunye nomthwalo wayo, ofuna ukukhula kunye nokunika uxolo kumphefumlo owenze ukuhamba kwayo. Kubalulekile ukwenza le nkqubo, kuba inokukunceda wena kunye nabo basondeleyo kulowo ungasekhoyo ukuba nikwazi ukwenza inkqubo yokulila ethande ukuba nzima kwaye ibuhlungu kakhulu, kuba umntu omthandayo elahlekile, ayisiyiyo Kulula kuye nabani na odibene nalo mntu.
Inkqubo yokulila yinkqubo yokuvimba kwezinye iimeko kwaye kwezinye zentlonipho, imelwe kwiinkcubeko ezininzi nakwiimeko njengezinto ezimnyama nezimbi, apho ulonwabo lungenandawo khona, ngenxa yesimboli salo esimuncu. Abanye abantu badinga unyango ukuze boyise kwaye abanye basebenzise ixesha, ukuze iphilise inxeba, nangona kunjalo, olo luvo luhlala luhleli, nokuba lixesha elingakanani elidlulayo.
Ukunxibelelana noThixo kuyinto ebalulekileyo kwaye ngakumbi, ukuba ufuna ukunika indlela elungileyo, kuba kukho intuthuzelo yokomoya, loo ntuthuzelo inikwa ngamandla eNkosi. Abantu abathandazayo nabenza i-novena bafuna induduzo kuzo zonke iimvakalelo ezinamandla kunye nokungonwabi, kodwa, nasekufuneni ukufuna intuthuzelo kunye noxolo kulowo ushiyeyo.
Uyenza njani i-novena?
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokwenza i-novena emntwini, eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba icandelo eliphambili alilahlekanga; iintsuku ezisithoba. Iintsuku ezigcinwe egameni lomntu, azinakuphoswa, ukuze uve onke amandla kunye namandla ofuna ukuwanika.
Ubunzima bungabanjwa, apho igama lomntu liya kuthi linikezwe kwaye, utata, abe sisikhokelo sale ndlela, ingoyena unika ubunzima asebenze njengesikhokelo kunye nesithethi, ukongeza, ukwenza imithandazo zilungele ukuzalisekisa injongo. Enye indlela, into ethe kratya kobuqu, kukwenza Ingcwele yeRosari, apho inkqubo ebonisiweyo yenziwa khona, inokuba ngumntu omnye okanye ababini, into ebalulekileyo kukuba umthandazo wencwadi uzalisekisiwe kangangeentsuku ezili-9.
Ukuba ulithandile inqaku, ndiyakumema ukuba ufunde: «Amabinzana amangcwaba». Ndiyazi ukuba uya kuyithanda.